I-China Parallel Slide Valve yenkqubo yomphunga-wamanzi mveliso kunye nabenzi | Ikhonkco
Chwetheza Isango Valve
Uxinzelelo I-PN20-50MPa 1500LB-2500LB
Ububanzi begama I-DN 300-500
Isetyenziswa njengezixhobo zokuvula nokuvala inkqubo yokumpompa okanye ezinye iinkqubo zombhobho woxinzelelo oluphezulu nophakathi we-600 ukuya kwi-1,000MW ye-supercritical (ultra-supercritical) yeyunithi yomphunga womphunga.
1.Yamkela uxinzelelo lokutywina uphawu, ngokudibanisa nge-welding kuzo zombini iziphelo.
2.Yisebenzisa i-valve yokuhamba ngombane kwindawo yokungena kunye nendawo yokuphuma yokulinganisa uxinzelelo lokwahlula ngaphakathi kunye nendawo yokuphuma.
3Isixhobo sokuvala sisebenzisa isakhiwo esine-flashboard. Ukutywinwa kwevelufa kuvela kuxinzelelo oluphakathi endaweni yamandla okwehla komatshini wokukhusela ivalve ekubandezelekeni okuyingozi ngexesha lokuvulwa nokuvalwa kwayo.
4.Nge-cobalt-based rigid alloy build-up welding, ubuso bokutywinwa bubonisa ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nokubola, ukumelana ne-abrasion, ubomi obude kunye nezinye izinto.
5.Ukufumana unyango lwe-anti-corrosion kunye ne-nitrogenization, umphezulu wevalve uneempawu ezintle zokumelana nokubola, ukumelana ne-abrasion kunye nokutywina kwebhokisi ethembekileyo.
6.Ingadibana nezixhobo ezahlukeneyo zombane kunye nezokungenisa umbane ukuhlangabezana neemfuno zolawulo lweDCS kunye nokuqonda imisebenzi ekude neyasekhaya.
7.Iya kuvulwa ngokupheleleyo okanye ivalwe ngexesha lokusebenza. Ayisayi kusetyenziswa njengevalve yokulawula.
Egqithileyo Intwasahlobo egcweleyo yohlobo lwevalve yokhuseleko (W uthotho)
Okulandelayo: Yakha Steel Trunnion Onyuswe ngokupheleleyo welding Ball Valve
Intwasahlobo evaliweyo ilayishe uhlobo olupheleleyo lokucinezela ...
I-3226 AWWA C509 NRS eQinisekileyo yokuHlala kweValve yeSango
I-MA Series i-Valve yokuLawula i-Stem
I-LVP yoPompo lweMpompo yokuThambisa amanzi